Daawo: Qoysas Soomaali ah oo ku nool Stockholm oo guryaha laga saarayo | Somaliska
Maanta waxaa magaalada Stockholm gaar ahaan xaafada Tensta ka dhacay kulan wada-tashi ah kaasoo ay isugu yimaadeen qoysas gaaraya 35 oo isugu jira Soomaali iyo qowmiyado kale, kuwaasoo ay shirkada guryaha Svenska Bostäder ay ku amartay in ay isaga baxaan guryahooda. Kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka soo qeyb galay ururo iyo dadka kale oo taageeraya qoysaska.
Qaar ka mid ah dadka aan wareystay ayaa ii sheegay in ku dhawaad Soomaali gaaraya 70 qoys lagu amray ama ay qatar ugu jiraan in guryahooda laga saaro. Arintaan ayaa cabsi weyn ku abuurtay Soomaalida ku nool xaafada Tensta iyo guud ahaan xaafadaha ay deganyihiin soogalootiga ee Stockholm. Heshiiska waqtiga gaaban ee loo yaqaan (Korttidskontrakt) ayaa la sheegay dhamaan dadka haysta in laga saari karo guryahooda.
Daawo qaar ka mid ah qoysaska oo ka waramada xaaladooda.
Gabar uurleh oo ka baxsatay in lagu celiyo Talyaaniga
Sweden iyo Warshadaha nukliyeerka
STOCKholm saaas waaaye income krav badan ayay dadka ku xiraan ,skit
July 14, 2015 at 14:05
Soomalida meel walbo waaku dhibantahay allaha ugar gaaro wadankeena nabad allaha kadhigo qof uma baahano Sverige waaka tagi laheen waxaa nagu haayo waa Alshabaab ilaah naarta haku fogeeyo inshaallah
gabadh rer somaliland ah says:
Sc. Horta walaalahaa dhiban waan u ducaynayaa inuu ilahay meel kheyr u leh dajiyo. Marka labaadna waan la yaabay sababtoo ah marka horeba 3biloodbay ugu talo galeen kort tid buu ahaaye hadiiba asxaan loo falay oo muddo loodaayay se aanan kontrakt ayna sexeexin maxay isku siiyeen meel ayna lahaynba. 3da bilood kaga guura hadii la odhan lahaa xagay tagi lahaayeen tolow. Maxaa siyaasad iyo cunsuriyad iyo waxan ay sheegayaan keenay tolow waan yaabanahay qof i qancin karaa ma jiraa xataa jimcaalena ha ahaadee??????
Isse Adam says:
July 14, 2015 at 14:59
illahay ha u fududeeyo dhamaan inta dhib haysto oo muslimiin ah..
Korttidskontrakt waxaa laga yabaa inay Hooyoyinka ka hoos baxaday macnihiisa oo dhan waa dhacdaa
Scw walaalayaal marka hore illaah ayaa mahadleh marka xiga walaalayaal illaahey haloonoqdo oo cafis halaweydiisto dhamaanteen islamarkaasna intiina hada guryaha waa lagasaaraa laleeyahay idinka iska bilaaba oo iscafiya . cafis kabacdi is aamina walaalayaal oo sameysta hogaan wax tarleh oo idiin shaqeeya somaliyey hurdada katoosa walaahi wax walbooxun waa leydin kutijaabinaa inta aad idinka kalaqeynsantihiin